ဆရာ, ဆရာမများအတွက် | USAHello | USAHello
သူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ပညာတတ်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များ. ထိထိရောက်ရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်သင့်မျက်နှာသစ်ကျောင်းသားများကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ profile များကို
ယဉ်ကျေးမှုအအကြောင်းကြားခံရ by, သင်သည်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုစာသင်ခန်းထဲမှာကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့ပိုကောင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ခုကလူဝင်မှု ESL ဆရာသူမ၏စာသင်ခန်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုတွေ့တစ်ခုကလူဝင်မှု ESL ဆရာမ, သင်ကြားရေးဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအတွက်သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်တွေ့. သူမကသူမ၏ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကို Read